Nepali Rajneeti | यो मन त मेरो नेपाली हो !
बैसाख २६, २०७८ आइतबार २२५ पटक हेरिएको
काठमाडौं : वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. वीरेन्द्र झाको ६ जनाको परिवारै कोरोना लागेर घरमै आइसोलेसनमा थियो। बाहिरबाट मान्छे बोलाउन नमिल्ने। आफन्त, छरछिमेकी आउने कुरा पनि भएन। खाना बनाउनै असहज अवस्था थियो। त्यही बेला डा. झालाई फोन आयो। रवि सिंहले फोन गरेका रहेछन्।
सिंह खाना बनाउनुअघि बिरामीलाई मेनु ह्वाट्सएपमा पठाउँछन्। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अन्य रोगका बिरामीले रोजेअनुसारको खाना मात्रै पुर्‍याउने गर्छन्। मासु चल्नेलाई त्यहीअनुसार, शाकाहारीलाई त्यहीअनुसार तयार पार्छन्। कोही खाना खान नसक्ने हुन्छन् उनीहरू सुप मगाउँछन्। उनीहरूलाई सुप मात्रै प्याक गरेर पुराइदिन्छन्।
‘ठूलो रकम सहयोग गर्ने र धेरैलाई सेवा पुराउने सक्ने ठुलो व्यापारी हैन म। तर, आफुसंग भएको खाना भोका मानिसहरूलाई बाड्न त सक्छु नि’, उनी भन्छन्। उनी कोही समस्यामा परेको थाहा पाउनासाथ तुरुन्तै पुगिहाल्छन्।
सामाजिक सेवाभाव अरूले सिकाउने कुरा नभएको उनको बुझाइ छ। थोरै भए पनि अरुका लागि सहयोग गर्न पाउदा आनन्द र सन्तुष्टि मिल्ने उनी सुनाउँछन्।
उनले करोडौं सम्पत्ति हुनेहरूलाई पनि अहिले सहयोगविहीन बन्नुपरेको अवस्थामा देखेका छन्। भन्छन्, ‘छोराछोरी विदेशमा, बुढाबुढी यहाँ ओछ्यान परेका हुन्छन्। स्याहार गर्ने कोही हुँदैन। यस्तै अवस्थामा चाहिने हो अपनत्व र माया। थोरै पनि हेरचाहको आवश्यकता।’
समस्या परेका परिवार तथा व्यक्तिले उनलाई सामाजिक सञ्जाल तथा फोनबाट जानकारी गराउँछन्। उनको रेस्टुरेन्टको पेजमा ५० हजारभन्दा बढी सक्रिय फलोअर्स छन्। यसकै आधारमा उनीकहाँ निःशुल्क खानाको अर्डर आउने गरेको छ।
उनको आफ्नै नामको फेसबुक पेज पनि छ। त्यसमार्फत उनी आफ्ना गतिविधि अपडेट गरिरहन्छन्। सामाजिक सञ्जाल र एक कान दुई कान हुँदै त्यही आधारमा उनीसँग खाना अर्डर गर्नेहरू आइपुग्छन्। उनको घर रहेको ठाउँका जनप्रतिनिधिले खाना सहयोगका लागि फोन गर्छन्। एउटै परिवारमा कैयौं दिन खाना पुर्‍याइरहन्छन् उनी। उनले काठमाडौं मेडिकल कलेजका २५ जनाका लागि नियमित खाना पुर्‍याएका छन्। दैनिक २ सयदेखी २ सय ५० जना कोभिड सक्रमित, आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिलाई साँझ–बिहान खाना खुवाउँछन्। अन्नपुर्णपोष्ट